LA PAJARA DELLA STELLA (LA PAJARA DE LU STIDDHRU) - I-Airbnb
Marittima, Puglia, Italy, Italy
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDorella
I-pajara, ngokuqwalasela zonke iinkcukacha, yindawo encinci yokusabela yothando ebekwe kwindawo emangalisayo, entywiliselwe kwintsimi yomnquma ehla elwandle.
Ngentsasa unokuvuka kusasa ukonwabele ukuphuma kwelanga phezu kolwandle ngaphambi kokuba udiphe echibini; ngokuhlwa ungangcamla iglasi elungileyo yewayini yaseSalento ngokutshona kwelanga okungenakuchazwa.
Ngaba ujonge indawo yomlingo apho unokudanisa khona ipizzica engaphazamisekiyo phakathi kwemithi yomnquma eneGulf of Castro esebenza njengendawo yangasemva? ILa pajara, isakhiwo esidala sezolimo esalungiswa ngokupheleleyo, sintywiliselwa kwimithi yomnquma ethambekele ezantsi kulwandle lwaseMarittima.
I-Pajara, ngokuqwalasela zonke iinkcukacha, incinci, i-retreat yothando ebekwe kwindawo emangalisayo. Ekuseni ungavuka kusasa ukonwabele ukuphuma kwelanga phezu kolwandle ngaphambi kokuntywila echibini, ngokuhlwa ungangcamla i-rosé evela eSalento kunye neminquma emibini emnyama kwitafile enkulu yamatye kunye nabahlobo. Ifanele isibini, ixhotyiswe ngebhedi enye kunye nesiqingatha (i-retractable), ikhitshi yangaphakathi, ikhitshi yangaphandle egcwele umatshini wokuhlamba kunye ne-dishwasher, igumbi lokuhlambela eliqingqiweyo elityeni, ibhedi yesithathu, i-air conditioning.
Indawo enkulu kunye nekhethekileyo yokufaneleka ixhotyiselwe isidlo sasemini sangaphandle kunye nesidlo sangokuhlwa kunye netafile enkulu yamatye, iambrela, ikhitshi langaphandle, ukukhanya ebusuku. Iqula elincinane lokuqubha elibekwe etyeni longeza umtsalane kulo lonke.
Umnini usebenza eBologna, kodwa usuka eSalento. Ekunye nomfazi wakhe uya kukuvuyela ukwamkela iindwendwe ngokobuqu nanini na kunokwenzeka, kungenjalo umntu othembekileyo uya kukwenza oko endaweni yakhe, ezenza afumaneke xa kuyimfuneko.
I-pajara ifikeleleka kwindlela emdaka malunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwindlela yephondo ifikelela esangweni, indalo yokuqala yegcisa laseSalento. Imoto inokupakishwa ngokukhuselekileyo ngaphakathi kwipropati. Ulwandle olunamatye lukumgama weekhilomitha ezimbalwa. Ngemoto unokufikelela ngokukhawuleza kuzo zonke iilwandle ezintle zaseSalento.
Imoto, efunekayo kolu hlobo lwendawo yokuhlala, inokupakishwa ngokukhuselekileyo ngaphakathi kwipropati.
Ukuhla malunga neemitha ezingama-200, ungaphinda uhambe uye "kwi-Fiori di Zagara" elunxwemeni olungezantsi, ngokuhamba kwindlela yendalo esecaleni kwepropati; (ukunyuka ukubuya kunconywa kuphela kubadlali bezemidlalo !!).
ILa Pajara intywiliselwe ngokupheleleyo kuhlaza lwepaki yendalo, kwindlela yaseOtranto-Bosco di Tricase-Santa Maria di Leuca yonxweme, ifikeleleka ngokulula ukusuka edolophini, kodwa ingaphazanyiswa zizindlu ezikufutshane.
Ukuba ngokupheleleyo kwiMeditera scrub, kuyacetyiswa ukuba uzixhobise ngeemveliso ezichasene neengcongconi ekutshoneni kwelanga.
Idolophana yaseMarittima yokuqala kunye neyamkelekileyo, amanyathelo ambalwa ukusuka kwindawo (kwabo bathanda ukuhamba nayo inokufikelelwa ngeenyawo), iyakwazi ukwanelisa lonke uhlobo lwesicelo, kunye neevenkile kuzo zonke iimfuno, iibhanki kunye neeposi, iindawo zokutyela. kunye pizza, kodwa ngaphakathi endlwini siya akuvumela kufumana uluhlu oluneenkcukacha lwe iindawo ezicetyiswayo neendawo kwindawo kotyelelo (kwaye kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokufika siya kukuvuyela kunika inkcazo yendlu kunye neengcebiso ezinye).
Umbuki zindwendwe ngu- Dorella
Siya kuhlala sifumaneka kwiindwendwe ngayo yonke imfuno njengoko ikhaya losapho likwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka ePajara kwaye siya kukuvuyela ukucebisa iilwandle kunye neendawo zokutyelela okanye iindawo zokutyela apho unokufumana isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa esivavanyiweyo.
Ukuba ngexesha lokuhlala kwakho, ngenxa yomsebenzi asinakukwamkela ngokwakho, siya kukwenza kumntu esimthembayo
Siya kuhlala sifumaneka kwiindwendwe ngayo yonke imfuno njengoko ikhaya losapho likwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka ePajara kwaye siya kukuvuyela ukucebisa iilwandle kunye neendawo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marittima